တူမောင်ညို ● “အကြမ်းဖက်ဝါဒ” – အစစ်အမှန်လား – တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုလား – MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို ● “အကြမ်းဖက်ဝါဒ” – အစစ်အမှန်လား – တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုလား
September 4, 2017 Aung Htet
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇
● “အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ အကြမ်းဖက်သမား” ဆိုတဲ့ စကားလုံးဝေါဟာရ
စကားလုံးဝေါဟာရတစ်ခုဟာ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တို့၏ သဘောနှင့်အသွင်သဏ္ဌာန်ကို ခြုံငုံဖော်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
“အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ဟူ၍ ရေးသားသုံးစွဲဖော်ပြနေကြသော်လည်း ထိုသို့ရေးသားသုံးစွဲ ဖော်ပြနေသည်မှာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို အပြည့်အစုံ လွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဟု ယူဆပါတယ်။
“အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား”ဆိုသော ဝေါဟာရရှေ့၌ ထည့်သွင်းသုံးစွဲတတ်သည့် ဝိသေသန တစ်ခုမှာ “အစွန်းရောက်” ဟူသော စကားလုံးပင်။ သို့ဖြင့် “အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှု- အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အစွန်းရောက် အကြမ်းသမား” ဟူ၍ဖြစ်လာသော်လည်း တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို အပြည့်အစုံ လွှမ်းခြုံဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
တကယ့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်၌ပါရှိသော ကြန်အင်လက္ခဏာများကို ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သို့ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပြောဆိုနေကြသော “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ဟူသော စကားလုံး ဝေါဟာရ၌ အောက်ပါ လက္ခဏာနှစ်ရပ် ပါဝင်နေပါတယ်။
– မည်သည့် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ ကျား/မ၊ အသက်အရွယ် ဟူ၍ ငဲ့ညှာထောက်ထားခွဲခြားမှု အလျဉ်းမရှိသော လက်ရဲဇက်ရဲလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု
ထိုလက္ခဏာချက် နှစ်ခုသည် ယနေ့ခေါ်ဆိုနေကြသော “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ဆိုသော ဝေါဟာရရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်း၊ ရုပ်နဲ့စိတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလက္ခဏာနှစ်ခုကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သီးခြားစီဖြစ်သွားအောင်၊ ပိုင်းခြားခွဲ စိတ်ပစ်ရန် ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့ပါ၍ “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ကို “အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင် လုပ်ကြံသတ် ဖြတ်မှု – အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးဝါဒ – အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရေးသမား” လို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားဖော်ပြမှသာ မြင်းနဲ့ပါးချပ် ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
● “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ရဲ့ အပေါ်ယံ အသွင်ပြင်
အပေါ်ယံအပြင်ပန်းသွင်ပြင် (သို့မဟုတ်) မျက်နှာဖုံးအဖြစ် “လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်” တစ်ခုခုကို ဆွဲယူ လွှမ်းခြုံထား တတ်ပါတယ်။ အရင်းခံအားဖြင့်မူ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့် ဘာသာတရား၊ မည်သည့်အသားရောင်ကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်း အလျဉ်း မရှိပါချေ။
မည်သည့် ကျား/မ၊ အသက်အရွယ်ဟူ၍ ငဲ့ညှာထောက်ထားပိုင်းခြားမရှိ သတ်ဖြတ်လေ့ရှိသော လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်ရိုင်းစိုင်း ယုတ်မာမှုက သာလျှင် ထိုသူတို့၏ မဖုံးကွယ်နိုင်သော တကယ့်မျက်နှာ၊ တကယ့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့မည်သည့် ပထဝီဒေသ အပိုင်းအခြားမှာမဆို အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားလာပြီဆိုလျှင် ထိုမျက်နှာနှင့်ထိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုသာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူတို့သည် “လူမျိုး၊ ဘာသာတရား၊ အသားရောင်” ဟူသော အရာတို့ကို သူတို့၏လူမဆန်သော ရက်စက်ယုတ်မာမှု လုပ် ငန်းစဉ်အတွက် လူသစ်စုဆောင်းမွေးယူရေးရာတွင် အပေါ်ယံဟန်ပြအဖြစ် တလွဲအသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါ၍ သူတို့၏ ခြေဖဝါးအောက်မှ ထိုသို့ မှိုင်းတိုက်၊ အသုံးချခံနေရသော “လူမျိုး၊ ဘာသာတရား၊ အသားရောင်” တို့ကို မလွဲမသွေ ဆွဲထုတ် ဖယ်ရှား ပစ်ပြီး “အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးဝါဒီများ” ကို အပြတ်ရှင်းပြစ်ရပါမယ်။
“အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” များကို ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်ရာတွင် သမရိုးကျနည်းလမ်းဖြင့် ရင် ဆိုင်တိုက်ဖျက်၍မရနိုင်ပါ။ “ ငါးကြင်းဆီဖြင့် ငါးကြင်းကြော်ခြင်း”၊ “ဓား ဓားခြင်း – လှံ လှံခြင်း” စတဲ့ တစ်ကြောင်းတိုက်၊ တစ်ပွဲထိုးနည်းလမ်းများဖြင့် အမြစ်ဖြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။
“အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” များကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားရောင် တံဆိပ်တစ်ခုခု ကပ်၍/တပ်၍ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်မည်ဆိုလျှင် မီးခိုးမဆုံးမိုးမဆုံးအန္တရာယ်ကို ဘက်တစ်ဖက်ကနေ မိုက်မိုက်မဲမဲဖိတ်ခေါ်ရာရောက်ပြီး၊ အခြားတစ်ဖက် မှ လည်း “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” များအတွက် မှိုင်းတိုက်လှည့်စားစရာ အကွက်နဲ့အချက်ကို ရရှိသွားစေပါလိမ့်မယ်။
သို့ပါ၍ “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲနေသူများအနေဖြင့် မည်သည့် “လူမျိုး၊ ဘာသာ၊အသားရောင်” ကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်း မပြုဘဲ၊ ကျယ်ပြန့်သောရပ်တည်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သော ကိုယ်စားပြုဖြင့်သာ တိုက်ပွဲဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတကာလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများအား၏ ဘုံအရေးအခင်းအဖြစ်ရည်တည် တိုက်ပွဲဝင်ရပါလိမ့် မယ်။ ပြုမူဆောင်ရွက်ရပါ လိမ့်မယ်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာတစ်ခု၊ အသားရောင် တမျိုးဘက်မှ ရပ်တည်၍၊ ကိုယ်စားပြု၍၊ ကြွေးကြော်ဟစ်အော် ၍ တိုက်ပွဲဆင်မည်ဆိုလျှင် “ကြွက်မနိုင်၍ ကျီမီးရှို့” ဆိုသောသူလို ညံ့ဖျင်းမိုက်မဲသူ၏ ပြုမူချက်မျိုးနှင့်သာ တစ်ထပ်တည်းတူ နေပါလိမ့် မယ်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်လျှင် တိုင်းပြည်ပျက်တာသာ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတုိ့အုပ်စိုးမှုတာရှည်ဖို့သာပဓာန တိုင်းပြည်ပျက်ချင်ပျက်၊ ပြည်သူတွေ သေချင် သေပါစေဆိုတဲ့ လူစားတွေလည်းရှိနေတာကို သတိပြုပါ။
● “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ဇစ်မြစ် – ဇာတိ – ဗီဇ
တကယ်တော့ “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” ဆိုတဲ့ နာနာဘာဝကို မန်းမှုတ် အသက်သွင်း မွေးမြူ ခဲ့ကြသူများမှာ နိုင်ငံတကာ လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်းရှင်စနစ်၊ အာဏာနိုင်ငံရေးနှင့် ဗိုလ်ကျလွှမ်းမိုးရေးတို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အမေရိကန်အုပ်စိုးသူများနဲ့ စီအိုင်အေတို့ကိုသာ လက်ညှိုးထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့၏ ပင်မရည်ရွယ်ချက်မှာ မတရား ဖိနှိပ် လုယက် သွေးစုပ်မှုများကြောင့် သဘာဝကျစွာပေါက်ကွဲပေါ်ထွက်သော နိုင်ငံ နှင့် ဒေသအသီးသီးက “လူထုတော်လှန်ရေးများ၊ လူထုတော်လှန်စစ်ပွဲများ၏ အပြန့်ကျယ်သောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ” ကို ချေမှုန်းပစ်ရန် /ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ ဆီးထားရန် ဖြစ်ပါတယ်။
“လူထုတော်လှန်ရေး” ကို သန္ဓေသားဘဝမှာ ကိစ္စတုန်းပစ်ရန်၊ သင်းသတ်ပစ်ရန်၊ ဖျက်ဆီးပစ်ရန်၊ လမ်းလွှဲပစ်ရန်အတွက် ဖော်စပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖော်မြူလာတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်၊ ထိုဖော်မြူလာရဲ့ လက်တွေ့အကျိုးဆက်အဖြစ် အာရှ၊ အာဖရိက၊ အာရပ်နိုင်ငံများနဲ့ လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံများမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုများနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်များပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုဒေသများနဲ့နိုင်ငံများရဲ့ စစ် အာဏာသိမ်းမှုများမှာ အမေရိကန်အုပ်စိုးသူများနှင့်စီအိုင်အေရဲ့ စနက်ကင်းသည်မှာလည်း အင်မတန်ရှားတောင့်ရှားခဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လိမ် ဗိုလ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းမှုနှင့် (မဆလ) ကို အမေရိကန်အုပ်စိုးသူများဟာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော် ပုံကြီး မတိုင်မီအထိ ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့သလဲဆိုတာ ပြန်လေ့လာကြည့်ကြပါ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်လာမှ အမေရိကန် အုပ်စိုးသူများအနေနဲ့ (မဆလ) အစိုးရရဲ့“လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု” ကို ကောက်ခါငင်ကာ မြင်တွေ့သွားကြပြီး၊ (နဝတ-နအဖ) စစ်အုပ်စုအနေနဲ့လည်း ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နှောင့်ယှက်သော အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံ (ဝါ) ကိုလိုနီနယ်ချဲ့လက်သစ် ကို ဗြုန်းစားကြီး တွေ့သွားကြပါတော့တယ်။
အခုတော့ “လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ” လို့ စွပ်စွဲခံရသူနဲ့ “ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သူ (ဝါ) ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်”လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးခံရသူတို့ “ပါးစပ်စစ်/လေစစ်” အပြန်အလှန်တိုက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် အချင်းချင်း ကြည် စေ၊ အေးစေ တစ်ပတ်လည်နေကြပြန်ပါပြီ။ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပါးစပ်စစ်/လေစစ် ဖြစ်ဖို့အတော်ကြာလိမ့်မယ်အုံးမယ်ထင်ပါတယ်။
● တပည့်ကျော်ကြောင့် သေ – ဆရာကြီးကြောင့် ကျေ
“လူထုတော်လှန်ရေး”ကို သန္ဓေသားဘဝမှာ ကိစ္စတုန်းပြစ်ရန်၊ သင်းသတ်ပြစ်ရန်၊ ဖျက်ဆီးပစ်ရန်၊ လမ်းလွှဲပစ်ရန် အတွက် ဖော်စပ်ခဲ့ကြသော ဖော်မြူလာနဲ့အတူ ပေါ်ပေါက်လာသော စစ်အာဏာရှင်များနဲ့ စစ်အုပ်စုများဟာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၌ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လူထုအုံကြွမှုများ၊ လူထုတော်လှန်ရေးများကို ရက်ရက်စက်စက်ဖိနှိပ်ချေမှုန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အာဖဂနစ္စတန် မှာ ကနဦးပေါ်လာသော “တာလီဘန်များ” ရဲ့ စစ်ရေးအောင်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ “ကျောင်းသားတပ်မတော်” ဆိုလို့ တာလီဘန်နဲ့ သူတို့သာလျှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ “ဒေါင်းအိုးဝေစာစောင်” ထဲက စစ်ရေးသတင်းရေးသားချက်ကို အမှတ်ရမိပါ သေးတော့တယ်။ နောက်တော့ တာလီဘန် ဇာတ်ရည်လည်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။
ထိုဖော်မြူလာကို လက်တွေ့အသုံးချခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်းဖက်သမား၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်စစ်အာဏာရှင်တို့ လူ လားမြောက်လာခြင်း၊ အရှင်မွေးနေ့ချင်းကြီးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ အသက်သွင်းမွေးမြူခဲ့သော မကောင်း ဆိုးဝါးကောင်တွေဟာ ချိုရော အတောင်ပံပါစုံခဲ့ပြီ၊ ကမ္ဘာတဝှန်းပျံသန်းပြီး အကြပ်ကိုင်ခြိမ်းချောက်မှုနဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ ကို အလွန်အတင့်ရဲစွာ လုပ်ဆောင်နေကြပေပြီ။
ဤသည်မှာ သရဲမွေးသော အောက်လမ်းဆရာ သူ့အတတ်နဲ့သူစူးပြီး သူမွေးသော သရဲတစ္ဆေက သူ့ကိုယ်ပြန်၍ ရန်မူနေခြင်း ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမနိုင် နှစ်ဆောင်ပြိုင်ဆိုသကဲ့သို့ဖြစ်လာကာ ကိုယ့်မွေးခဲ့သော သရဲတစ္ဆေကို ပြန်လည်နှိမ်နင်းရန် အ ကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲ (War on Terror) ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ စစ်ဆင်နေပါတယ်။
သူတို့မွေးမြူခဲ့ကြသောသူများက အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်အုပ်စိုးခဲ့သဖြင့် ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုကြုံခဲ့ရသော ပြည်သူများမှာ ယခုတဖန် သရဲမွေးသော မှော်ဆရာက သူမွေးထားသော ထိုနာနာဘာဝများ သုတ်သင်ရေးစစ်ပွဲ (war on terror) ဆင်နွှဲပြန် သောအခါ သက်ဆိုင်ရာပြည်သူများမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဆုတ်ယုတ်ပျက်ပြားကာ ကြီးမားလှသော ဒုက္ခသည်များ၊ နိုင်ငံ မဲ့များ စတဲ့ပြဿနာကို မွေးထုတ်မိလျက်သားဖြစ်လာပါတော့တယ်။
သို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေမှာ ပြည်သူတွေဟာ “တပည့်ကျော်” ရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်အုပ်စိုးမှုကြောင့် အတုံးအရုန်း သေပွဲဝင်ခဲ့ကြရသလို၊ “ဆရာကြီး” ကြောင့်လည်း ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကျေပြုန်းပျက်စီးပြိုကွဲရတဲ့ တိုင်းပြည်ဘဝကို ကျ ရောက်ကြရပြန်ပါတယ်။ (အီရတ်မှာ၊ အာဖဂန်မှာ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို အထင်းသားမြင်နေရပါတယ်) ဆရာကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ကယ်တင်ရှင်ကြီး ဂိုက်ဖမ်းနေပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဆရာနဲ့တပည့် စစ်မက်ဖက်ပြိုင်ကြရင်း လူမဆန်သော ရက်စက်မှုများ၊ ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှုကြီးများ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေကျေမှုများ၊ ဘေးလွတ်ရာသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးကြရမှုများဟာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဘာမှမဆန်းကျယ် သော ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ်များသဖွယ်ဖြစ်လာနေပါတော့တယ်။
သူအသက်သွင်းမွေးမြူခဲ့တဲ့ “တပည့်ကျော်ချေမှုန်းရေးစစ်ပွဲ” မှာ ဆရာကလည်း သူဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ လက်နက်သစ်၊ လက်နက်ဆန်းတွေ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရာ/ကြော်ငြာထိုးစရာပစ်ကွင်း/ပြကွင်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနေပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနဲ့ဒေသများက ပြည်သူများအဖို့မှာတော့ ရှင်ကြီးဆိုးနဲ့ကျားဆိုး အကြားမှာ ကျရောက်နေတဲ့ တကယ့်မြေစာ ပင်။ ဆေးရုံများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ လူနေရပ်ကွက်များပေါ်သို့ ဗုံးကြဲချခြင်းများ၊ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ စသဖြင့် အသက် သွေးသွေး၊ ယမ်းခိုးယမ်းငွေ့များသာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးနေကြရမှုများသာ။
“အကြမ်းဖက်ဝါဒ” – အစစ်အမှန်လား – တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုလား
လူထုတော်လှန်ရေး” ကို ချေမှုန်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက် “စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ”ကို လက်နက်တပ် ဆင်ပေး၊ လေ့ကျင့်ပေး၊ အားပေးအားမြှောက်ထောက်ခံခဲ့ကြသလို။ ယခုတဖန် “အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး” ဆိုတဲ့ ဆိုင်း ဘုတ်အောက်မှာ “လူထုတော်လှန်ရေး” တွေကို အကြမ်းဖက်မှုအဖြစ် အသေရဖျက်နေတယ်၊ ချေမှုန်းနေပြန်တယ်ဆိုတဲ့ အ ချက်ကို လည်းရှင်းလင်း ကြည်လင်စွာ မြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြဖို့ပါတယ်။
“သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမား” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရထက် “အကြမ်းဖက်သမား” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက အုပ်စိုးသူတွေအဖို့ သည်းချေ ကြိုက်စကားလုံးဖြစ်နေပါတယ်။ “အကြမ်းဖက်သမား” လို့ အမည်တတ်လိုက်ရင် အဲဒီလိုအမည်တပ်ခံရသူတွေအပေါ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာ တရားတယ်/ လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းထွက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ “ဥပဒေ” ဆို တာတွေကိုလည်း လက်ဦးမှုယူပြီး ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ “အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး” ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကို နိုင်ငံအသီးသီးက သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတို့ထူးခြားချက် နဲ့အညီ လက်တွေ့အကျဆုံး အသုံးချနေကြတာကိုလည်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သာဓကတစ်ခုအဖြစ် “တိဘက် – စင်ကျန်ဒေသ” က လှုပ်ရှားမှုတွေကို အနောက်အုပ်စုက “ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေ” လို့ အမည်တပ်ချီးမွန်းသော်လည်းကို တရုတ်ဗဟိုအစိုးရကတော့ “အကြမ်းဖက်သမားတွေ” လို့သာ ရှုမြင်ပြီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်း ပါတယ်။
ယနေ့စစ်အုပ်စုကလည်း “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်” ထဲဝင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်။ လက်နက်ကိုင်ပြီးလိုချင်တာ တောင်း ဆိုတဲ့ခေတ်ကုန်သွားပြီလို့ သူတို့လက်ထဲကသေနတ်မချဘဲ၊သေနတ်တွေအမြောက်တွေ တဒုန်းဒုန်းတဒိုင်းဒိုင်းပစ်ခတ်ပြီး၊ စစ်လေယာဉ်ပျံ တွေ၊ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ ဒုံးတွေ၊ ဗုံးတွေကြဲချ၊ ပစ်ချပြီး လက်နက်စွဲကိုင်ခုခံတော်လှန်နေသူတွေကို အ ကြမ်းဖက်သမားအဖြစ် စွပ်စွဲပုံဖော်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် “အကြမ်းဖက်မှု – အကြမ်းဖက်ဝါဒ – အကြမ်းဖက်သမား” လို့ဆိုရင် အခိုင်အမာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့မုချလိုပါတယ်။
ပထမအချက်က အုပ်စိုးသူတွေက သူတို့အုပ်စိုးမှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ လူထုတော်လှန်ရေးကို “အကြမ်းဖက်” ဆိုင်းဘုတ်ကပ်ပြီး ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နေတာလား။
ဒုတိယအချက် အုပ်စိုးသူတွေဟာ သူတို့ကို ဦးတည်လာနေတယ့် လူထုနိုးကြားလာမှုနဲ့ လူထုတော်လှန်ရေးကို လမ်းလွှဲပစ်ဖို့ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကို “လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး” မျက်မှန်းစိမ်းတပ်၊ မှိုင်းတိုက်ပြီး မှောင်မိုက်ခါးသည်းတဲ့ ချောက်ထဲတွန်းချနေ တာလား။
တတိယအချက် စစ်အုပ်စုတစ်စုဟာ “တိုင်းပြည်မှာ သူတို့ မရှိရင်မဖြစ်ဘူး” ဆိုတဲ့ အရှက်မဲ့ဆင်ခြေလိမ်ကို ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေ၊ အဝင်အလာတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို ပက်ပက်စက်စက် စ တေးပစ်ပြီး ပရိယာယ်အကွက်ဆင်နေတာလား။
သို့ပါ၍ “အကြမ်းဖက်ခြိမ်းချောက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးဝါဒ” ကို စစ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုထဲနဲ့ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်း သုတ်သင် နိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသာရောင်အစွဲဖြင့် တုန့်ပြန်မယ်/တိုက်ခိုက်မယ် ဆိုလျှင်လည်း ပဒူအုံကို တုတ်နဲ့ ဆွသလိုဖြစ်နေပြီး၊ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ တဖက်သတ် ချောင်ပိတ်ချေမှုန်းခြင်းဟာ မီးခိုးမဆုံးမိုးမဆုံးတဲ့ လက်စားချေမှုများကို တံခါးဖွင့် ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်ပြီး၊ မိမိနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့်ရေတိုရေရှည်အကျိုးစီးပွားတွေကို မိုက်မိုက်မဲမဲ စတေးပစ်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းလမ်းမှာ ကြွက်မနိုင်၍ စပါးကျီကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းသောငမိုက်သားလုပ်ရပ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဝါဒကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသုတ်သင်ရာမှာ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းချောက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးဝါဒအတွက် ခုတုံးလုပ် အသုံးချ သွားစေနိုင်မယ့် မည်သည့် “လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသားရောင်” စတဲ့ အယူအစွဲများဖြင့် သိမ်းကျုံးဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုသင့်ဘဲ။ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ အသားရောင်စွဲ ကင်းရှင်းစွာဖြင့်သာ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဖီအာနန်ဦးစီးသော ရခိုင်ဒေသလေ့လာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့“အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ” ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း အော်ဟစ် နေခြင်းမှာ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းချောက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးဝါဒအတွက် အလိုတူ အလိုပါလုပ်ဆောင်ခြင်းတမျိုးသာဖြစ်ပါ တယ်။ လောင်နေသောမီးကို ရေဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခြင်းမပြုဘဲ။ ဓာတ်ဆီးလောင်း၍ ငြိမ်းသတ်ရန် ကြံစည်နေတဲ့ နလဗိန်းတုန်းမိုက်မှုနဲ့အပြုအမူသာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့သော နလဗိန်းတုန်း မိုက်မဲမှုကို “အမျိုးသားရေး (ဝါ) မျိုးချစ်စိတ်” အဖြစ် လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ အားပေးနေကြမည် ဆိုလျှင် ထိုသို့အားပေးသူများမှာ ထိုနလဗိန်းတုန်းများထက် အဆတစ်သောင်း ပို၍မိုက်တွင်းနက်သူများသာဖြစ်ပေလိမ့် မယ်။
အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုလား၊ ကျူးကျော်ရန်စမှုလား သို့တည်းမဟုတ် ဒီချုပ်အစိုးရကို အကြပ်ကိုင်တုတ်နှောင်ဖို့ တမင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ နောက်ထပ်ကြိုးတစ်ချောင်းလား၊ သို့တည်းမဟုတ် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်ဗန်းပြ ခြောက်လှန့် မှိုင်းတိုက်ပြီး အဆုံး အစ မထင်သောချောက်ကမ္ဘားထဲသို့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူကို တွန်းချနေတဲ့အကြံအစည် လားဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြည်သူများ ခွဲခွဲခြားခြား၊ ကွဲကွဲပြားပြား၊ ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်တတ်၊ ကြည့်တတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ။
← ကာတွန်း ATH ● ဈေးကွက်ချဲ့တာပေါ့ကွာ ….
မောင်မောင်စိုး ● အသစ်မြင် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၂) →
“ခွန်ကောရီယို” ကို လွှတ်ပေး – Free Khun Kawrio!
April 16, 2012 April 16, 2012 Yan Lo Kywe
ခေါင်းဆောင်မှုအကျပ်အတည်း ( Leadership Crisis) ကို ဒီလှိုင်းက ပြောပြနေသလား ..?
January 22, 2013 Aung Htet
တူမောင်ညို – ဗိုလ်တင်အေးတို့လုပ်သမျှ ငုံ့ချည်းခံနေကြတော့မှာလား
September 9, 2014 Aung Htet